Hantidiisa iyo Soo Gudbinta galmada - Doorka Ciyaaraha
Shackles, whips, raaxo
Awooda awood la'aanta
Mararka qaar wax walba waa la oggol yahay oo waxba waxna way ka boodaan, way adkaan kartaa in ay la kulmaan iyo la kulmaan eroticism. Faa'iidada joogtada ah waxay dadka badankeeda ka dhigtay kuwo xanaaqsan erotic iyo jinsi ahaan. Waxay ka maqan tahay neefta xayawaanka, taas oo ka soo jiidashada-ereyga mar hore ku noolaa.
Jacayl, rabitaan iyo ciyaar -
Hase ahaatee, ninkan ayaa xajistiisu waa isha oo joogto ah iyo dib u cusboonaysiin. Sidaas awgeed waxay sidoo kale ku guulaysatay inay nolosheeda cusub u neefsato eroticism.
Inkasta oo aad u lahaa in la raadiyo wax, laakiin waxa uu mar kale Wax laga helay in ay yihiin hadlin, ka badan ama ka yar, kaas oo aan sidaas darteed ku hareereysan aura ee qarsoodiga iyo Reebay.
Nolosha badhka ah ee xiriirka waa mid gaaban oo gaaban, taas oo aan dhici karto in ay ugu wacan tahay horey loogu soo sheegey dhaleeceynta jinsiga.
Waa ilaa laba si aad u hesho ma aha oo kaliya in arrimaha maalin kasta isku raacsan yahay oo qof walba si fiican ku noolaan karaan, laakiin had iyo abuurta cusub oo ku saabsan hab galmada iyo in la qeexo.
Had iyo jeer waa wax cusub, si aad u hadasho.
Qof kastaa wuxuu leeyahay malayn, laakiin ma aha oo kaliya malayn, laakiin sidoo kale riyooyin, riyooyin erotic ah si aad u gaar ah. Waxyaabo aan la taaban karin ama la taaban karo oo keena shakhsiga hore ugu raaxeysiga, haddii ay ka fikirto oo kaliya. Badanaa, dareen-celinnadaas ayaa ah kuwo aan dhammeystirnayn sababtoo ah si toos ah loola xiriirin karo lammaanaha. Laakiin taasi maahan inay ahaato, maxaa yeelay xitaa rafiiqaa wuxuu leeyahay rabitaan galmo oo qarsoodi ah, oo uu jeclaan lahaa inuu ku noolaado.
Waa fursad loogu talagalay lamaanaha halkan si ay u caawiyaan midba midka kale ee isku dhufashada heerarka xiga ee eroticism - oo uusan ka qaadin wax ka badan wadahadal gaaban.
Caadi ahaan, rabitaanada qarsoodiga ah badankoodu waa naadir ... laakiin yaa doonaya inuu noqdo mid caadi ah? Qofna! Dhab ahaan, qaar ka mid ah riyooyin ayaa ka badan kuwa kale, laakiin dhammaantood waa qiimo leh isla markaana si siman u qiimeeya isku dayga.
Dadaaladda cusub ee halkan waa erayga muhiimka ah
Lamaanayaal badan ayaa badanaa la yaabay sida ay ugu faraxsan yihiin waxay ku heli karaan hababka cusub ee galmada iyo saameynta xooggan ee xooggan ee nolosha galmada ku qancisa nolol maalmeedka.
Fikrad jinsi caam ah oo dad badani waxay ku lug leeyihiin dhammaan noocyada kala duwanaanta. Taasi maahan horumar cusub. Waxaa la caddeeyay in addoonsiga iyo wixii la mid ah taariikhda la taaban karo ee bani-aadminnimada ay ahayd dhacdo jinsi oo muuqaal ah.
Ku fooganaanta galmada
In prudish qarniyadii dhexe, sida in Rome dhaqamada Xadgudbayaasha ama xataa hore ee qadiimiga ah kaga soo kiraystaan ​​Mesobotamiya waxaa wax la yaab leh oo ku saabsan soo jiidashada gaar ah kula beera ubaxa ka addoonnimada lammaanaha ama isagoo laftiisa ku xidhay si ay u helaan ahaa.
Siyaabaha loo xiro qofku waa mid aad u tiro badan iyo sidoo kale meesha uu keeni karo farxad weyn.
Adiga oo ah qof ku cusub adduunyada ciyaaraha addoonsiga erotic, waa in aad u maleyneysaa inuu fudud yahay marka hore. Taas macnaheedu maaha in uusan noqon karin duurjoogta! Kaliya waa in aan si dhakhso leh u helin tamar buuxa oo isku dayaya inuu soo galo arrinta, laakiin si tartiib ah ayuu u soo dhowaadaa. Sababtoo ah marmarsiiyo aad u xiiso badan ayaa joojin kara tijaabinta hore - oo waa inaadan u ogolaanin wax aad u qurux badan oo qurux badan oo runtii ah mid aad u dhib badan adigoo ah mid aad u adag. Aamusnaanta ayaa ku jirta awoodda.
Habka ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo guriga iyo inta ugu sarreysa sariirta. Sababtoo ah sariirta guriga dhexdeeda badanaa waxay bixisaa doorashooyinka xoriyada ugu fiican. Miisaanka sariirta, madaxa iyo lugaha ayaa ah mid waxtar leh sida lugaha sariirta ama qaabka.
Sidoo kale, doorashada dhexdhexaadinta, oo midkoodna uu doonayo in uu xiro qofka ka soo horjeeda waa in si fiican loo qorsheeyaa. Waxaa ugu wanaagsan in la koro qalab jilicsan. Waxaa dhici karta in maro wanaagsan ama dhabar jilicsan - maqaar iyo dhuxul wali waxay yeelan doonaan wakhti dambe (iyo sidoo kale waxay u baahan yihiin waxoogaa tababar ah).
Ma jiraan wax adag oo adag oo bilowga ah. Xitaa haddii lammaanuhu ka codsado. Mararka qaarkood waxaa dhacda in dhalinyaradu aysan helin buro furfuran ... marka loo isticmaalo si sax ah, waxay ku ridi karaan burqaan markay naftooda ku jiraan. Taasi waa sababta aysan hubaal aheyn wax khalad ah.
Taasi waa sababta ay ugu fiicantahay bilowga: Wax walba waa la oggol yahay, laakiin ha ku degdegin!
Dadka qaarkiis waxay jecel yihiin fikradda ah inay jimicsiga awood ku yeeshaan kuwa kale, jidh ahaan ama maskax ahaan. Dadka kale, oo dhinaca kale ah, waxay door bidaan fikradda ah in qof kale uu ku dhaco - mar kale jirka iyo sidoo kale maskaxiyan.
Waxaa jiri kara sababo badan oo tan. Inta badan dadka Muslimiinta ah ee nolol maalmeedka galmada waa dad aad u badan ayaa ku saabsan meel adag oo ay shirkadda ama cid kale ood adag. Waxaa la mid ah shaqsiyaad badan, kuwaas oo xitaa waxaa laga yaabaa in darana xishood ka baxsan qolka hurdada waa. Waxaad mar walba raadsataa waxa aanad haysan - sidoo kale gudaha galmada.
Kaalinta ciyaarta iyo xukunka
"Beeraha waxqabadka" ee madaxda iyo dadyowga ayaa ku dhawaad ​​aan xad lahayn. Inta badan cayaaraha hore loo soo sheegey waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo doorka lamaane kasta. Laakiin dabcan way ka sii gudbi kartaa ciyaaraha addoonsiga.
Qaar ka mid ah dadku waxay dareemaan farxad gaar ah in ay ku dhacdo xanuun jireed. Si aad u abuurto xanuunka, waxaad isticmaali kartaa qalab kala duwan - ha ahaato shinbiraha, foorarrada ama xitaa naadiyo ama boombooyin. Qaarkood waxay jecel yihiin in ka badan kuwa kale.
Laakiin xanuunka maskaxdu maaha mid aan caadi ahayn qolalka jiifka oo leh dabeecad awood leh. By erayada ama foomamka la dhimay habab dhabta ah jirdil nafsi ah, boogaha nafsi ah oo qoto dheer waxay keeni kartaa ... Dabcan, ma ay joogin joogto ah oo waxaa loo isticmaalaa oo kaliya koror jecel yahay waqti xaadirkaan ee falka.
Waa inaad ka taxadartaa inaadan dhaafin. Ka hor inta aan la samayn ficil kasta waa inaad la sameysid lammaanaha oo loo yaqaan "erey nabdoon". Haddii ereygan nabadgelyo leh loo yeero, dhammaan tallaabooyinka waa in la joojiyaa si dhakhso ah oo aan diidmo lahayn. Natiijo ahaan, qayb ahaan waxqabadka, waxaad haysataa hubaal ah in aanad aad u adag tahay.
Qaar ka mid ah musiibooyinka goobta ayaa sheegaya in mid ka mid ah "waa in uu joojiyaa marka uu dhiig ku dhaco", dadka kale, ka dibna madadaalo fiican ayaa bilaabanaya. Waa mawduuc aad u gooni ah oo qof kastaa uu tijaabiyo xuduudiisa. Ma jirto daawo guud oo loogu talagalay xaddiga neefta oo la dareemo ama loo adeegsado isticmaalka ugu badan ee galmada. Laakiin waxay ku jirtaa: Wax kasta oo dhexdhexaad ah.